#Opinion : နေမာ ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့မှာ PSG က ဘာစီလိုနာ ရွေ့မယ့် အကွက်တွေကို ကြိုမြင်ခဲ့လေသလား ? - SPORTS MYANMAR
#Opinion : နေမာ ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့မှာ PSG က ဘာစီလိုနာ ရွေ့မယ့် အကွက်တွေကို ကြိုမြင်ခဲ့လေသလား ?
ကိုရီးယား ဒရာမာ ဇာတ်လမ်းထက်တောင် အလှည့်အပြောင်း များလွန်းတဲ့ နေမာ ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းတွေဟာ မနေ့ညက အဆုံးသတ် သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နေမာ ကလဲ ဘာစီလိုနာကို ပြောင်းရွှေ့ချင်ခဲ့သလို ၊ ဘာစီလိုနာ ကလဲ အပြောင်းအရွှေ့ ဖြစ်လာနိုင်မယ့် နည်းလမ်း မျိုးစုံသုံးပြီး ကြိုးစားခဲ့သည့်တိုင်အောင် အောင်မြင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
အဓိက အလှည့်အပြောင်း အခိုက်အတန့်ဟာ ဘာစီလိုနာ ဘက်က ကော်တင်ဟို ကို ဘိုင်ယန် မြူးနစ်ထံ အငှားချလိုက်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပြီး ၊ PSG က လိုချင်နေသည့်တိုင်အောင် ပိုပြီး သေချာတဲ့ ဘိုင်ယန်ဆီ ရောင်းထုတ်ခဲ့ရာကနေ နေမာ ကို ခေါ်ယူဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေတွေ နည်းပါး သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းမှာတော့ PSG ကလဲ ကော်တင်ဟို ကို နေမာ ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့သလို ၊ ဘာစီလိုနာ ဘက်ကလဲ သဘောတူထားခဲ့တာပါ။ သို့သော် ကော်တင်ဟို ဘယ်ဈေးနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး PSG က ခေါ်ယူမလဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို ဆွေးနွေးကြချိန်မှာတော့ နှစ်ဖက် အသင်းရဲ့ သတ်မှတ်မှုတွေဟာ ကွာဟလွန်းခဲ့တာကြောင့် ၊ ဘာစီလိုနာ ကလဲ ချက်ခြင်း ခေါ်ယူချင်နေတဲ့ ဘိုင်ယန် မြူးနစ်ဆီ အငှားချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အနေအထား ကပဲ ဘာစီလိုနာ အတွက် အကျပ်အတည်းတွေ ဖန်တီးသွားခဲ့တာပါ။ နေမာ ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ငွေသားချည်းပဲ ဆိုရင် လုံလောက်မှု မရှိတာကြောင့် ၊ ကနဦး အငှားနဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် PSG ဘက် က ပယ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ပီအက်စ်ဂျီဟာ သူတို့ လိုချင် တဲ့ ကစားသမာ3းယောက် + ယူရို 130 သန်း တောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပေမယ့် ၊ ဘာစီလိုနာ ဘက်က နောက်ဆုတ် သွားခဲ့တာပါ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ PSG ဥက္ကဌ အယ်ခီလာဖီ ကိုယ်တိုင်က ဘာစီလိုနုာ အနေနဲ့ နေမာ ကို ခေါ်ယူချင်တယ် ဆိုရင် ယူရို သန်း 300 လက်ငင်း ပေးချေပါက ချက်ခြင်း ခေါ်ယူလို့ ရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာရင်းနဲ့ အဆုံးသတ် သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအနေအထားတွေ မှာ ဖြစ်နိုင်ချေ အလွန်နည်းပါး တဲ့ အကြားက ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာလဲ နေမာ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ရဲ့ ကစားသမား စာရင်းအရ နေမာ ကို ခေါ်ယူမယ် ဆိုရင်တောင် လူငယ် တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမားတွေ ဖြစ်တဲ့ ဗီနီစီးယပ် ၊ ရိုဒရီဂို ၊ အဆန်စီယို တို့အထဲ က တစ်ဦးဦးကို မဖြစ်မနေ ရောင်းချရမှာ ဖြစ်သလို ၊ အဲဒီ အထဲက ဘရာဇီး ကစားသမား နှစ်ဦးဟာ မကြာခင်ကမှ အသင်းကို ရောက်ရှိထားခဲ့သူတွေပါ။
ဒါတောင် နေမာ ကို ခေါ်ယူဖို့ ထွက်ပေါ်လာသေးတဲ့ သတင်း တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
PSG ဥက္ကဌ နဲ့ ရီးရဲ ဥက္ကဌ တို့အကြား ကောင်းမွန် တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိနေတာကြောင့် ဘေးကနေ ခြောက်လှန့်ပေးခဲ့တာလား (သို့) သူတို့ အချင်းချင်း လက်ဝါး ရိုတ်ပြီး ဘာစီလိုနာ က ငွေပုံပေးအောင် လုပ်ခဲ့တာလား ဆိုတော့ စဉ်းစားဖို့ ကောင်းတဲ့ အချက် တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် PSG ဟာ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ ကစားသမား ခေါ်ယူဖို့ သုံးစွဲတတ်တဲ့ နည်းစနစ် တစ်ချို့ ကို ကြိုတင် တွက်ဆထားမိခဲ့လို့ ၊ အခုလို ရီးရဲ ကလဲ နေမာ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား သယောင်ယောင် သတင်းတွေ ဖန်တီးခဲ့တာလား ဆိုတာ ပိုပြီး သံသယ ဖြစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ယူရို သန်း 100 ကျော် ကစားသမား တွေ ခေါ်ယူပြီ ဆိုရင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အဆင်ပြေပြေ နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပဲ ၊ အဖုအထစ် များစွာနဲ့သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
2017 ခုနှစ် က နေမာ ရဲ့ နေရာကို အစားထိုး ဖို့ အတွက် ဒေါ့မွန် တောင်ပံ ကစားသမား ဒမ်ဘီလီ ကို ခေါ်ယူဖို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကလပ် အသင်းဘက်က ဘူးခံငြင်းနေချိန် မှာတော့ ကစားသမား ဟာ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်တွေကို ပျက်ကွက် လာခဲ့သလို ၊ ဒေါ့မွန်ကိုလဲ အသင်းပြောင်းခွင့် ပေးဖို့ ဖိအားပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ ခေါ်ယူမယ့် ကလပ် နဲ့ ကစားသမား အေးဂျင့်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဖန်တီးလေ့ရှိတဲ့ အကွက်မျိုး ဖြစ်ပြီး ၊ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီ သတင်းတွေကို မီဒီယာတွေ စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးကာ ၊ အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။
2018 ခုနှစ် က ကော်တင်ဟို ကို ခေါ်ယူစဉ်ကလဲ ဘာစီလိုနာ ဟာ အလားတူ ပုံစံမျိုး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၊ ကတ်တလန် မီဒီယာတွေ ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ အတူ ရအောင် ခေါ်ယူသွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
နောက်ဆုံး ပူပူနွေးနွေး တစ်ခုကတော့ ဂရစ်ဇ်မန်း ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ဖြစ်ပြီး ၊ စာချုပ် ဖျက်သိမ်းခွင့် လျော်ကြေးကို လက်တစ်လုံးခြား ပေးချေကာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်လဲ အေတီကို နဲ့ တရားရင်ဆိုင်ကြမယ့် သတင်းတွေ ဆက်စပ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက် ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရင်းတွေကို PSG က သိနေခဲ့သလို နေမာ ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့မှာတော့ လီယိုနာဒိုဟာ တော်တော်လေး ပြင်ဆင်ထားခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ တစ်ဖတ်မှာလဲ ကတ်တလန် မီဒီယာတွေ ရဲ့ မှိုင်းမမိအောင် ရီးရဲ မက်ဒရစ်က စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဟန်တွေ ပြခိုင်းခဲ့တာလား (ဒါမှ မဟုတ်) ရီးရဲ ကပဲ ဘာစီလိုနာ အနေနဲ့ ငွေတွေ အဆတန် သုံးလိုက်ရအောင် လိုက်ပြီး ကလိ ပြနေခဲ့တာလား ဆိုတာ သံသယ ဖြစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာစီလိုနာ ဟာ လက်ရှိ အပြောင်းအရွှေ့မှာတော့ နေမာကို ခေါ်ယူဖို့ လက်လျှော့လိုက်ရပါပြီ ၊ လာမယ့် အပြောင်းအရွှေ့ ရာသီမှပဲ ခေါ်ယူဖို့ ဆက်ပြီး ကြိုးစားမလား ၊ ဒီကြားထဲမှာ နေမာ ကများ စိတ်ပြောင်းပြီး အသင်းမှာ ဆက်နေမလား ဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့် သွားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…………..
#Opinion : နမော ရဲ့ အပွောငျးအရှမှေ့ာ PSG က ဘာစီလိုနာ ရှမေ့ယျ့ အကှကျတှကေို ကွိုမွငျခဲ့လသေလား ?
ကိုရီးယား ဒရာမာ ဇာတျလမျးထကျတောငျ အလှညျ့အပွောငျး မြားလှနျးတဲ့ နမော ရဲ့ အပွောငျးအရှေ့ သတငျးတှဟော မနညေ့က အဆုံးသတျ သှားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
နမော ကလဲ ဘာစီလိုနာကို ပွောငျးရှခေ့ငျြခဲ့သလို ၊ ဘာစီလိုနာ ကလဲ အပွောငျးအရှေ့ ဖွဈလာနိုငျမယျ့ နညျးလမျး မြိုးစုံသုံးပွီး ကွိုးစားခဲ့သညျ့တိုငျအောငျ အောငျမွငျခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။
အဓိက အလှညျ့အပွောငျး အခိုကျအတနျ့ဟာ ဘာစီလိုနာ ဘကျက ကျောတငျဟို ကို ဘိုငျယနျ မွူးနဈထံ အငှားခလြိုကျတဲ့ အခြိနျဖွဈပွီး ၊ PSG က လိုခငျြနသေညျ့တိုငျအောငျ ပိုပွီး သခြောတဲ့ ဘိုငျယနျဆီ ရောငျးထုတျခဲ့ရာကနေ နမော ကို ချေါယူဖို့ ဖွဈနိုငျခတြှေေ နညျးပါး သှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အစောပိုငျးမှာတော့ PSG ကလဲ ကျောတငျဟို ကို နမော ရဲ့ အပွောငျးအရှေ့ အစိတျအပိုငျး တဈခုအဖွဈ ထညျ့သှငျးပေးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့သလို ၊ ဘာစီလိုနာ ဘကျကလဲ သဘောတူထားခဲ့တာပါ။ သို့သျော ကျောတငျဟို ဘယျစြေးနဲ့ သတျမှတျပွီး PSG က ချေါယူမလဲ ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျကို ဆှေးနှေးကွခြိနျမှာတော့ နှဈဖကျ အသငျးရဲ့ သတျမှတျမှုတှဟော ကှာဟလှနျးခဲ့တာကွောငျ့ ၊ ဘာစီလိုနာ ကလဲ ခကျြခွငျး ချေါယူခငျြနတေဲ့ ဘိုငျယနျ မွူးနဈဆီ အငှားခလြိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ အနအေထား ကပဲ ဘာစီလိုနာ အတှကျ အကပျြအတညျးတှေ ဖနျတီးသှားခဲ့တာပါ။ နမော ကို ချေါယူဖို့ အတှကျ ငှသေားခညျြးပဲ ဆိုရငျ လုံလောကျမှု မရှိတာကွောငျ့ ၊ ကနဦး အငှားနဲ့ ကမျးလှမျးခဲ့ပမေယျ့ PSG ဘကျ က ပယျခသြှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျ ပီအကျဈဂြီဟာ သူတို့ လိုခငျြ တဲ့ ကစားသမာ3းယောကျ + ယူရို 130 သနျး တောငျးဆိုခဲ့ပွနျပမေယျ့ ၊ ဘာစီလိုနာ ဘကျက နောကျဆုတျ သှားခဲ့တာပါ။
နောကျဆုံးမှာတော့ PSG ဥက်ကဌ အယျခီလာဖီ ကိုယျတိုငျက ဘာစီလိုနုာ အနနေဲ့ နမော ကို ချေါယူခငျြတယျ ဆိုရငျ ယူရို သနျး 300 လကျငငျး ပေးခပြေါက ခကျြခွငျး ချေါယူလို့ ရတယျ ဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါလာရငျးနဲ့ အဆုံးသတျ သှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီအနအေထားတှေ မှာ ဖွဈနိုငျခြေ အလှနျနညျးပါး တဲ့ အကွားက ရီးရဲ မကျဒရဈ ဟာလဲ နမော ကို ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားတဲ့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါ ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိ ရီးရဲ မကျဒရဈ ရဲ့ ကစားသမား စာရငျးအရ နမော ကို ချေါယူမယျ ဆိုရငျတောငျ လူငယျ တောငျပံ တိုကျစဈ ကစားသမားတှေ ဖွဈတဲ့ ဗီနီစီးယပျ ၊ ရိုဒရီဂို ၊ အဆနျစီယို တို့အထဲ က တဈဦးဦးကို မဖွဈမနေ ရောငျးခရြမှာ ဖွဈသလို ၊ အဲဒီ အထဲက ဘရာဇီး ကစားသမား နှဈဦးဟာ မကွာခငျကမှ အသငျးကို ရောကျရှိထားခဲ့သူတှပေါ။
ဒါတောငျ နမော ကို ချေါယူဖို့ ထှကျပျေါလာသေးတဲ့ သတငျး တျောတျောလေး စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးပါတယျ။
PSG ဥက်ကဌ နဲ့ ရီးရဲ ဥက်ကဌ တို့အကွား ကောငျးမှနျ တဲ့ ဆကျဆံရေးတှေ ရှိနတောကွောငျ့ ဘေးကနေ ခွောကျလှနျ့ပေးခဲ့တာလား (သို့) သူတို့ အခငျြးခငျြး လကျဝါး ရိုတျပွီး ဘာစီလိုနာ က ငှပေုံပေးအောငျ လုပျခဲ့တာလား ဆိုတော့ စဉျးစားဖို့ ကောငျးတဲ့ အခကျြ တဈခကျြ ဖွဈပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ PSG ဟာ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ ကစားသမား ချေါယူဖို့ သုံးစှဲတတျတဲ့ နညျးစနဈ တဈခြို့ ကို ကွိုတငျ တှကျဆထားမိခဲ့လို့ ၊ အခုလို ရီးရဲ ကလဲ နမော ကို ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစား သယောငျယောငျ သတငျးတှေ ဖနျတီးခဲ့တာလား ဆိုတာ ပိုပွီး သံသယ ဖွဈဖို့ ကောငျးပါတယျ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ယူရို သနျး 100 ကြျော ကစားသမား တှေ ချေါယူပွီ ဆိုရငျ တဈကွိမျတဈခါမှ နှဈဦး နှဈဖကျ အဆငျပွပွေေ နဲ့ ချေါယူနိုငျခွငျး မရှိခဲ့ပဲ ၊ အဖုအထဈ မြားစှာနဲ့သာ အဆုံးသတျခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
2017 ခုနှဈ က နမော ရဲ့ နရောကို အစားထိုး ဖို့ အတှကျ ဒေါ့မှနျ တောငျပံ ကစားသမား ဒမျဘီလီ ကို ချေါယူဖို့ ခဉျြးကပျခဲ့ပါတယျ။ ကလပျ အသငျးဘကျက ဘူးခံငွငျးနခြေိနျ မှာတော့ ကစားသမား ဟာ လကေ့ငျြ့ရေး အစီအစဉျတှကေို ပကျြကှကျ လာခဲ့သလို ၊ ဒေါ့မှနျကိုလဲ အသငျးပွောငျးခှငျ့ ပေးဖို့ ဖိအားပေးလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါဟာ ချေါယူမယျ့ ကလပျ နဲ့ ကစားသမား အေးဂငျြ့တို့ ပူးပေါငျးပွီး ဖနျတီးလရှေိ့တဲ့ အကှကျမြိုး ဖွဈပွီး ၊ နောကျပိုငျးမှာ အဲဒီ သတငျးတှကေို မီဒီယာတှေ စာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးကာ ၊ အတငျးအကပျြ ဖိအားပေးတဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ အပွောငျးအရှေ့ ဖွဈလာအောငျ လုပျဆောငျခဲ့တာပါ။
2018 ခုနှဈ က ကျောတငျဟို ကို ချေါယူစဉျကလဲ ဘာစီလိုနာ ဟာ အလားတူ ပုံစံမြိုး လုပျဆောငျခဲ့ပွီး ၊ ကတျတလနျ မီဒီယာတှေ ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ အတူ ရအောငျ ချေါယူသှားခဲ့ဖူးပါတယျ။
နောကျဆုံး ပူပူနှေးနှေး တဈခုကတော့ ဂရဈဇျမနျး ရဲ့ အပွောငျးအရှေ့ ဖွဈပွီး ၊ စာခြုပျ ဖကျြသိမျးခှငျ့ လြျောကွေးကို လကျတဈလုံးခွား ပေးခကြော လုပျဆောငျခဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့လဲ အတေီကို နဲ့ တရားရငျဆိုငျကွမယျ့ သတငျးတှေ ဆကျစပျ ထှကျပျေါလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အထကျ ဖျောပွပါ အကွောငျးအရငျးတှကေို PSG က သိနခေဲ့သလို နမော ရဲ့ အပွောငျးအရှမှေ့ာတော့ လီယိုနာဒိုဟာ တျောတျောလေး ပွငျဆငျထားခဲ့ဟနျတူပါတယျ။ တဈဖတျမှာလဲ ကတျတလနျ မီဒီယာတှေ ရဲ့ မှိုငျးမမိအောငျ ရီးရဲ မကျဒရဈက စိတျဝငျစားတဲ့ ဟနျတှေ ပွခိုငျးခဲ့တာလား (ဒါမှ မဟုတျ) ရီးရဲ ကပဲ ဘာစီလိုနာ အနနေဲ့ ငှတှေေ အဆတနျ သုံးလိုကျရအောငျ လိုကျပွီး ကလိ ပွနခေဲ့တာလား ဆိုတာ သံသယ ဖွဈဖို့ ကောငျးပါတယျ။
ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ ဘာစီလိုနာ ဟာ လကျရှိ အပွောငျးအရှမှေ့ာတော့ နမောကို ချေါယူဖို့ လကျလြှော့လိုကျရပါပွီ ၊ လာမယျ့ အပွောငျးအရှေ့ ရာသီမှပဲ ချေါယူဖို့ ဆကျပွီး ကွိုးစားမလား ၊ ဒီကွားထဲမှာ နမော ကမြား စိတျပွောငျးပွီး အသငျးမှာ ဆကျနမေလား ဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့ သှားရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ…………..